Ohola Precision CNC Milling Service-OEM / ODM China CNC Milling / Milled Izingxenye Umkhiqizi
Ngabe udinga okuthembekile CNC Millingumlingani onekhwalithi engenakuqhathaniswa? I-Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd.iyinkampani ye-China CNC enolwazi futhi enolwaziIzinsizakalo ze-CNC zokugaya ngemishini esezingeni eliphakeme kufaka phakathi CNC Millingizikhungo ezisuka ku-eksisi e-3 ziye kuma-eksisi ama-5 nonjiniyela abanamakhono.Oopharetha bethu abafezayo bahamba phambili ku-CAD (idizayini esizwa ngamakhompyutha) nezinhlelo ze-CAM (ezenziwa ngosizo lwekhompyutha). Bahlale bekwazi ukuthola indlela engcono kakhulu yokukhiqiza ikhwalithi ephezulu kakhuluIzingxenye ze-CNC ezifakiwe nezakhi zamakhasimende.
Ngamandla aqinile neminyaka yokuhlangenwe nakho okucebile, singanikeza ngokwezifiso ezisezingeni eliphakeme kepha ezishibhile Izinsizakalo ze-CNC zokugaya kufaka phakathi ama-eksisi ama-3 CNC Milling izikhungo ezi-5-eksisi CNC Milling izikhungo zokukhiqiza ngejubane elikhulu i-CNC, i-prototyping esheshayo, nokunemba CNC Millingnokujika. Imikhiqizo yethu esezingeni eliphezulu esheshayo ye-CNC ifaka isandla emkhakheni wemboni ezishintshayo, i-aerogenerator, izingxenye zezimoto, imishini yokugaya, imishini yezokwelapha, imishini yelebhu, izingxenye zokukhanyisa imishini, njll.
Amakhono nezici ze-Ouzhan Precision CNC:
- Iminyaka engu-15 yokuhlangenwe nakho nokwazi kanjani Izinsizakalo ze-CNC machining, I-Ouzhan ikakhulukazi ihlinzeka nge-OEM / ODM Isevisi yokugaya i-CNC nemikhiqizo ehlobene kufaka phakathi ukugaya okunemba, ukugaya izinsimbi, i-plastic mlling, njll.
- Sekela ukukhiqizwa kwamaqoqo amabhethri aphansi, aphakathi nendawo kuya phezulu.
- Rapid prototyping futhi ekupheleni-ukusetshenziswa yokukhiqiza.
- Ukunemba okuphezulu, ukukhiqiza isivinini esikhulu nokwethembeka okuphezulu.
- Uhla olubanzi lwezinto zensimbi nezamaplastiki.
- Ukuphela okudingekayo nokubekezelelana okuqinile kuyatholakala.
- Bangaphezu kuka-20 amasethi eziphambili CNC Milling imishini e-Ouzhan.
Kungani Khetha Ouzhan CNC Milling Services
Imishini yethu yokukhiqiza esemqoka ingenisiwe isuka eSwitzerland naseJapan, enganikeza amakhasimende ngokunemba okuphezulu (± 0.01mm) futhi ashibhile CNC Milling amanani.
2.Multiple CNC yokukhiqiza amakhono
Ngaphezu Milling, thina ngokukhethekile turning, lathing, imishini, Izinsizakalo ze-CNC zokuguqula nokugaya, ukuze uthole ukukhetha okukhulu kwe- Izingxenye zomshini ze-CNC eqenjini lethu esithembekile.
Sinezisebenzi zokuhlola ikhwalithi yobungcweti kanye nezixhobo zokusebenza, ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba kwimikhiqizo yakho ongayihlola, futhi sikhiphe umbiko wokuhlola oningiliziwe wamakhasimende ' CNC machining izingxenye.
Osayizi ngezifiso kanye bobunjwa ayatholakala. Uyemukelwa ukwaba imidwebo yakho ye-2D noma ye-3D CNC machining izingxenye nathi, masisebenzisane ukwenza impilo ibe nobuciko ngokwengeziwe.
Yini i-CNC Milling Service nokuthi Isebenza kanjani i-CNC Milling
CNC Milling inqubo yokukhiqiza esusayo esusa ngokushesha izinto ezisensimbi noma emabhuloki epulasitiki ukukhiqiza izingxenye ezinemba kahle ngokubekezelelana okuqinile.
CNC Millingilungele kangcono njengenqubo yesibili noma yokuqedela umsebenzi owenziwe ngomshini osuvele unikeze incazelo noma ukukhiqiza izici zengxenye, njengezimbobo, izikhala nemicu. Kodwa-ke, le nqubo isetshenziselwa ukubumba ucezu lwento kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Kuzona zozimbili lezi zinqubo, inqubo yokugaya isusa kancane kancane izinto zokwakha ukwakheka nokufiswa kwengxenye. Okokuqala, ithuluzi lisika izingcezu ezincane-okusho ukuthi, ama-chips — zisuswe emsebenzini ukuze zakhe isimo nesimo sefomu. Ngemuva kwalokho, ubuciko benziwa inqubo yokugaya ngokunemba okuphezulu kakhulu nangokunemba okukhulu ukuqeda ingxenye ngezici zayo ngqo nokucaciswa. Imvamisa, ingxenye eqediwe idinga ukudlula okuningana kwemishini ukufeza ukunemba okuvumayo nokubekezelelana. Ezingxenyeni eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe zejometri, ukusethwa kwemishini eminingi kungadingeka ukuqedela inqubo yokwenza.
Izinto Zokugaya ze-CNC - Izinto ezisetshenziselwa i-CNC Milling
Izinto ezitholakalayo ze-CNC Milling
I-Garolite G-10 I-Garolite G-10 I-Garolite G-10 I-Garolite G-10
Ithusi C101 Ithusi C101
Inayiloni 30% GF Inayiloni 30% GF Inayiloni 30% GF
Izicelo ze-CNC Milling Services nezingxenye
Nayi inketho ebanzi yensimbi yokuqedela izinsiza ongazikhethela izingxenye zomshini we-CNC wokugaya ukuze uthuthukise ukubukeka kwezingxenye, ukubushelela kwendawo, ukumelana nokugqwala, nezinye izici: